बिग बैंग थ्योरी सारांश: उत्पत्ति र विशेषताहरु | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ब्रह्माण्ड कसरी बनेको थियो? कुन कारणले तारा, ग्रह र आकाशगंगा को गठन भयो? यी केहि प्रश्नहरू हुन् जुन इतिहासमा लाखौंले सोधेका छन्। विशेष रूपमा, वैज्ञानिकहरू अस्तित्वमा रहेको सबै घटनाहरूको लागि व्याख्या खोज्न चाहन्छन्। यहाँबाट जन्मिएको छ बिग बैंग थ्योरी। अझसम्म थाहा नभएकाहरूका लागि यो सिद्धान्तले हाम्रो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिलाई वर्णन गर्दछ। यसले ग्रहहरू र ग्यालक्सीहरूको अस्तित्वको विवरण पनि संकलन गर्दछ।
यदि तपाइँ उत्सुक हुनुहुन्छ र जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी हाम्रो ब्रह्माण्ड गठन गरियो, यस पोष्टमा हामी तपाइँलाई सबै कुरा भन्न लाग्दछौं। के तपाईं गहिराईमा बिग बै Bang सिद्धान्त जान्न चाहानुहुन्छ?
1 बिग बैंग सिद्धान्तको विशेषताहरू
2 ताराहरू र आकाशगंगाहरूको गठन
3 एक विस्तार ब्रह्माण्ड र विस्फोटको प्रमाण
4 खोजकर्ताहरू र अन्य सिद्धान्तहरू
बिग बैंग सिद्धान्तको विशेषताहरू
यो पनि भनिन्छ बिग बैंग सिद्धान्त. यो एक हो जसले हाम्रो ब्रह्माण्डको अरबौं वर्ष पहिले एउटा ठूलो विस्फोटनमा शुरू भयो भनेर हामीलाई कायम राख्छ। आज ब्रह्माण्डमा विद्यमान सबै कुरा केवल एक बिन्दुमा केन्द्रित थियो।
विस्फोटनको क्षणदेखि नै पदार्थ विस्तार हुन थाल्यो र आज पनि गर्दैछ। वैज्ञानिकहरू दोहोर्याइरहन्छन् कि ब्रह्माण्ड निरन्तर विस्तार हुँदैछ। यस कारणले गर्दा, बिग बैंग सिद्धान्तले विस्तारित ब्रह्माण्डको सिद्धान्त समावेश गर्दछ। एकै बिन्दुमा भण्डार गरिएको विषयवस्तु विस्तार गर्न मात्र थाल्यो, साथै अझ जटिल संरचनाहरू पनि बनाउन थाल्यो। हामी परमाणु र अणुहरूलाई जनाउँछौं, थोरै बेर, जीवित जीवहरू गठन गर्दै थिए।
बिग बैंगको सुरुवातको मिति वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरे। यसको उत्पत्ति करीव १ 13.810१० मिलियन वर्ष पहिले भएको थियो। यस चरणमा जब ब्रह्माण्ड भर्खरै सिर्जना गरिएको थियो, यसलाई प्राइभल ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यसमा, कणहरूमा ठूलो मात्रामा उर्जा हुन्छ।
यस विस्फोटसँगै, पहिलो प्रोटोन, न्यूट्रन र इलेक्ट्रोनहरू गठन भए। प्रोटोन र न्युट्रनहरू परमाणुको केन्द्रकमा संगठित थिए। यद्यपि, इलेक्ट्रोनहरू, विद्युतीय चार्ज दिए, तिनीहरू वरिपरि व्यवस्थित थिए। यस तरिकाले पदार्थको उत्पत्ति भयो।
ताराहरू र आकाशगंगाहरूको गठन
हाम्रो सौर्य प्रणाली भित्र छ आकाशगंगा मिल्की वे भनिन्छ। बिग ब्यांग पछि धेरै स्टारहरू जुन हामीले थाहा पाएका थियौं।
पहिलो ताराहरू १ 13.250.२550 अरब वर्ष पहिले गठन गर्न शुरू भएको विश्वास गरिन्छ। लगभग 13.200० मिलियन वर्ष पछि विस्फोट पछि तिनीहरू देखा पर्न थाले। सब भन्दा पुरानो ग्यालेक्सीहरूको उत्पत्ति १.4.600.२ अरब वर्ष पहिले भएको थियो, जुन उनीहरूलाई अझ पुरानो बनाउँछ। हाम्रो सौर्यमण्डल, सूर्य र ग्रहहरू XNUMX अरब वर्ष पहिले गठन गरिएको थियो।
एक विस्तार ब्रह्माण्ड र विस्फोटको प्रमाण
बिग बै Bang सिद्धान्तले अर्थ बनाउँदछ भन्ने प्रमाणित गर्न ब्रह्माण्डको विस्तार भइरहेको छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्दछ। यी सम्बन्धमा यी प्रमाणहरू हुन्:
ओल्बर विरोधाभास: रातको अन्धकार।
हबलको कानून: आकाशगंगाहरू एक अर्काबाट टाढा जाँदैछन् भनेर अवलोकन गरेर यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ।
पदार्थको वितरणको एकरूपता।
टोलम्यान प्रभाव (सतह चमक) मा भिन्नता।
टाढा सुपरनोवा: एक अस्थायी फैलाव यसको प्रकाश घटतामा अवलोकन गरिन्छ।
विस्फोटको क्षण पछि, प्रत्येक कण विस्तार हुँदै र एक अर्काबाट टाढा जाँदै थियो। यहाँ के भयो त्यस्तै केहि समान थियो जब हामी बेलुनलाई उडाउँछौं। अधिक हवाको रूपमा हामी परिचय गर्दछौं, हावाको कणहरू भित्तामा नपुगुन्जेल बढी र अधिक विस्तार हुन्छन्।
सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रीहरूले बिग ब्यांग पछि सेकेन्डको १ / १०० सेकेन्डमा शुरू हुने घटनाहरूको यो कालक्रम पुनर्निर्माण गर्न सफल भएका छन्। जारी गरिएको सबै कुरा पहिचान भएका प्राथमिक कणहरू मिलेर बनेको थियो। ती मध्ये हामी फेला पार्दछौं इलेक्ट्रोन, पोसिटरन, मेसन, बेरियन्स, न्यूट्रिनो र फोटोनहरू.
केही अधिक हालको गणनाले हाइड्रोजन र हीलियम विस्फोटको प्राथमिक उत्पादनहरू हुन् भनेर संकेत गर्दछ। भारी तत्वहरू पछि ताराहरू भित्र गठन भयो। जब ब्रह्माण्डको विस्तार हुन्छ, बिग बै Bang्गबाट ​​अवशिष्ट रेडिएसन चिसो हुन जारी रहन्छ सम्म यो3के (-२270० डिग्री सेल्सियस) को तापक्रमसम्म पुग्दैन। कडा माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरणको यी अवशेषहरू रेडियो खगोलविद्हरूले १ 1965 XNUMXome मा पत्ता लगाए। यो ब्रह्माण्डको विस्तार देखाउँदछ।
वैज्ञानिकहरूको ठूलो शंका भनेको ब्रह्माण्ड अनिश्चित कालको लागि विस्तार भइरहेको छ वा यसलाई फेरि सम्झौता हुनेछ भने समाधान गर्नु हो। गाढा पदार्थ यसमा ठूलो महत्त्व छ।
खोजकर्ताहरू र अन्य सिद्धान्तहरू
ब्रह्माण्डको विस्तार भइरहेको सिद्धान्त १ 1922 २२ मा अलेक्ज्याण्डर फ्रेडम्यानले बनाएको थियो। उनी अल्बर्ट आइनस्टाइनको (१ 1915 १1927) सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित थिए। पछि, १ XNUMX २ in मा, बेल्जियमका पादरी जर्जेस लेमाट्रे वैज्ञानिक आइन्स्टाइन र डे सिटरको काममा आकर्षित भए र फ्रिडेम्यानको जस्तो निष्कर्षमा पुगे।
त्यसकारण वैज्ञानिकहरू अर्को निष्कर्षमा पुग्दैनन्, केवल ब्रह्माण्डको विस्तार भइरहेको छ।
ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारेमा अन्य सिद्धान्तहरू छन् जुन यो भन्दा महत्त्वपूर्ण छैन। यद्यपि विश्‍वमा केहि मानिसहरु छन् जो विश्वास गर्छन् र तिनीहरुलाई साँचो मानेछन्। हामी त्यसलाई तल सूचीकृत गर्दछौं।
बिभिन्न क्रन्च सिद्धान्त: यो सिद्धान्तले ब्रह्माण्डको विस्तार बिस्तारै ढिलो हुँदै गइरहेको छ भन्ने तथ्यमा यसको जग बसाल्यो जबसम्म यो फिर्ता लिन सुरु हुँदैन। यो ब्रह्माण्डको संकुचनको बारेमा छ। यो संकुचन बिग क्रौंच भनेर चिनिने ठूलो इम्प्लोशनमा अन्त्य हुनेछ। यो सिद्धान्त समर्थन गर्न को लागी धेरै प्रमाण छैन।
चक्रव्यह ब्रह्माण्ड: यो हाम्रो ब्रह्माण्ड एक स्थिर बिग ब्यांग र बिग क्रन्च मा दोलन को बारे मा हो।
स्थिर राज्य र निरन्तर सिर्जना: यसले ब्रह्माण्डको विस्तार भइरहेको छ र यसको घनत्व स्थिर रहन्छ किनकि निरन्तर सृष्टिमा मामला छ।
मुद्रा स्फीति सिद्धान्त: यो बिग बैंग समान सुविधाहरूमा आधारित छ तर यसले त्यहाँ प्रारम्भिक प्रक्रिया रहेको बताउँदछ। प्रक्रियालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ र ब्रह्माण्डको विस्तार छिटो हुन्छ।
अन्तमा, त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जो सोच्छन् कि ब्रह्माण्ड भगवान वा केही ईश्वरीय इकाई द्वारा सृष्टि गरिएको हो।
यस लेखको साथ तपाईं हाम्रो ब्रह्माण्डको गठन र विस्तारको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ। के तपाई सोच्नुहुन्छ कि एक दिन ब्रह्माण्डको विस्तार रोकिनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » बिग बैंग थ्योरी
लुइस पुलिडो भन्यो
ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे त्यहाँ विभिन्न थियरी र परिकल्पनाहरू छन्, तर मेरो लागि ब्रह्माण्ड अद्वितीय छ, र सँधै हुनेछ, यो पनि अस्तित्वमा छ र अवस्थित हुनेछ; र यो यो सधैं स्थिर परिवर्तनमा हुन्छ, र हामी यसको भाग हौं। जहाँ समय अवस्थित हुँदैन, यदि अहिलेको क्षणमा रूपान्तरण भएन, जुन जहाँ हामी बस्दछौं परिवर्तनहरू हुन्छन्; यदि तपाईंले विगत वा भविष्यका लागि ब्रह्माण्ड खोजी गर्नुभयो भने तपाईंले कहिल्यै फेला पार्नुहुने छैन किनभने यो केवल हाम्रो आत्मा, आत्मा, दिमाग र विचारको वर्तमानमा रहेको छ। समय मापन मानव संगठन को एक सृष्टि मात्र हो। कुनै पनि विगतमा सोच्न सक्दैन वा यसमा सर्न सक्दैन, यदि हामीले सोचेकै हो र आज जुन हामी छौं त्यसबाट रूपान्तरणको रूपमा दर्ता गरेको कुराको सोचमा, स्पष्ट र निरन्तर रूपान्तरण र विकासको प्रक्रियामा, जहाँ हामी हाम्रो आशा राख्छौं। राम्रो बाँच्न। मानव ब्रह्माण्ड अन्त्य गर्न एक होइन; र उनी केवल परिवर्तनको एक मामूली एजेन्ट हुनेछ, आफ्नो लागि जीवनको राम्रो गुणस्तरको खोजीमा। यदि एक दिन मानिसहरूले ग्रहलाई नष्ट गर्न सक्षम बल सिर्जना गर्न सक्दछन् भने, तिनीहरूले यसलाई विस्फोट गर्न यसको मूल भागमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ, र मेरो प्रिय मित्र, मलाई लाग्छ कि यो असम्भव छ र यो आत्म-विनाशको एक साँचो कार्य हो। यो मैले यो देखेको छु!
लुइस पुलिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस ए। पेरेज आर। भन्यो
टिप्पणीहरू देख्न सकिन्छ (यो प्रकाशित नगर्नुहोस्)
कार्लोस ए Pérez आर। को जवाफ
म भगवानमा विश्वास गर्दछु। अब मलाई सिद्धान्त बुझाउनुहोस् कि कसरी हामी महिलाको गर्भमा गठन हुन्छौं र पुरुष किन स्त्री हो जसले गर्भवती बनाउँछ, यदि हामी बे bang्ग बै bang्गको सृष्टि हौं किनकि अन्य मानव यौनबाट जन्मेका हुन्छन् भने
Anyi लाई जवाफ दिनुहोस्
जैमे फेरेस भन्यो
मलाई लाग्छ कि ब्रह्माण्डको सृष्टिमा विश्वास गर्नु बिग ब्या Bang्ग सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। बिग बैंगको अगाडि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ नै एक जसले ठूलो धमाकाको कारण बनाउनुभयो: यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले तत्काल सबै चीज र सबै ऊर्जा बनाउनुभयो। त्यसोभए महान विस्तार, र शीतलता सुरु भयो जुन वैज्ञानिकहरूले हामीलाई व्याख्या गर्छन्।
तर विस्फोटन किन भयो भनेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले वर्णन गर्नुहुन्छ।
बाइबलमा यो आलंकारिक भाषामा वर्णन गरिएको छ कि सृष्टि चरणहरूमा भएको थियो। त्यो रूपक वर्णन बिग ब्यांग स्पष्टीकरणको साथ उपयुक्त छ।
जैमे फेरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि परमेश्वरले सबै कुराको सुरूमा आदम र हव्वालाई मात्र सृष्टि गर्नुभयो, र उनीहरूले पुनउत्पादित गरे र उनीहरूका बच्चाहरू र नातिनातिनाहरू भए, तर परमेश्वर परिवार बीचको सम्बन्धमा सहमत हुनुहुन्न, कसरी सबै कुरा उत्पन्न हुने छ?
Leongm21 लाई जवाफ दिनुहोस्
बेनिटो अल्बारेस भन्यो
ठूलो धमाकाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्दछ, जीवन सूक्ष्म जीवहरूको रूपमा देखा पर्दछ, सूक्ष्म जीवहरू विकसित हुन्छन् (यसले सबै पास भएको वर्णन गर्दछ तर यस्तो देखिन्छ कि तपाईंको दिमागले धेरै दिदैन) जीवहरू पत्ता लगाउँदछ कि प्रजननको सबै भन्दा प्रभावकारी तरीका भनेको एक जीवन्त तरीकामा हुन्छ, त्यसका लागि २ जीवहरू चाहिन्छ, एउटा नर र एउटा मादा, शुक्राणु र अण्डा एकसाथ आउँछ र अर्को जीवित प्राणी बनाउँछ। अन्य शब्दहरूमा हामी विशाल ब्याY्गले सृष्टि गर्दैनौं, विशाल बैANG्गले युनिवर्सिटीलाई सिर्जना गर्‍यो र हामी यसद्वारा क्रिएट भएनौं।
Benito Albare लाई जवाफ दिनुहोस्
येशू क्रिस्ट पहिले भन्यो
भगवान: म अल्फा र ओमेगा हुँ। (बिग बैंग) उत्पत्ति: ब्रह्माण्डको निर्माण। सुरुमा परमेश्वरले आकाश सृष्टि गर्नुभयो - (जुन ब्रह्माण्ड किनभने आकाश निलो ओजोन तह होईन) - र अन्धकार - (अन्धकार) - अगाध खाडलको बीमलाई ढाक्यो - परमेश्वरले भन्नुभयो: त्यहाँ प्रकाश छ र त्यहाँ प्रकाश थियो (इलेक्ट्रोनहरू। न्यूट्रनहरू। प्रोटोनहरू) ... र उसले यसलाई अँध्यारो (विस्फोट र विस्तार) लाई दिन र अँध्यारो रात भनिने ज्योतिमा विभाजित गर्‍यो (विस्फोटबाट प्राथमिक उत्पादन देखा पर्‍यो जुन हाइड्रोजन र हीलियम (पानीको सृष्टि) थियो र त्यसपछि बाँकी तिनीहरू बाइबलबाट थाहा पाउँदछन् ... भगवानले एक्स्ट्रास्टेरियल टेलिभिजन भनिन्छ र एक स्वयम्सेवाको अनुरोध गर्नुहुन्छ र लुज बेला "लुसिफर" प्रस्ताव गरिएको छ ताकि एक आध्यात्मिक संकल्पको माध्यमबाट सृष्टि गरिएको मानवलाई असल र खराब छनौट गर्न लोभ्याउँछ ... हामी वर्तमानमा छौं भन्ने कुरा रेप्टिलियनहरू तेस्रो आकाशगंगाबाट आउँछन् र जानकारी दिन्छन् कि हामीले विश्वास गरेका ईश्वर, प्रकृति, हावा, पानी, पृथ्वी, आगो, अरूहरू मध्येका हुन् ... हामी सिद्धान्तहरूसँग पूर्ण छौं र यो मानवद्वारा निर्धारण गरिएको छ जुन केवल प्रमाणित छ कि हामी जन्म लिन्छौं र मरेका हुन्छौं र अल्फा र ओमेगा समाप्त हुन्छन्। ठूलो धमाका
सबैभन्दा पहिले येशू ख्रीष्टलाई जवाफ दिनुहोस्